Izay miseho eo, safidy… | NewsMada
Izay miseho eo, safidy…
Vita iny ny fifidianana. Nanomboka omaly hariva, samy liana amin’izay valiny avokoa ny mpanara-baovao, arakaraka ny kaominina misy azy avy. Tsy mbola misy afaka miresaka fandresena, indrindra amin’ireo kaominina misy mpifaninana mifanahantsahana. Ny fironana kosa no fantapantatra ato anatin’ny roa na telo andro.
Ny zava-misy amin’ny ankamaroan’ny kaominina aloha, adin’ny kandidàn’ny IRK sy ny an’ny Tim ity fifidianana ity. Mifanakaikikaiky eo rahateo ny vokatra vonjimaika ka mahatonga fifandrangitana mahery vaika. Efa nisy ireo nandrangaranga ny hoe hala-bato, mialoha ny androm-pifidianana. Ny marain’ny alarobia, nahitana trakta niparitaka nanerana ireo fokontany vitsivitsy eto Antananarivo, nampitandrina amin’ny mety hisian’ny hosoka, ny fividianana sy ny hala-bato, sns.
Ambany dia ambany ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy… Faheno hatrany tamin’ireo fifidianana nifanesy teo io, saingy nihamafy tamin’ity. Mety ho maro ny antony, maro ny tsy fahatomombanana isan-tsokajiny, saingy tsy manome rariny ireo tsy tonga nifidy namita ny adidiny izany. Misy anefa ary maro ireo nirehareha fa tsy nifidy ary tsy miraharaha izany fifidianana izany…
Izay tsy nifidy noho ny tsy fahatomombanana, omena rariny raha toa ka nalahelo tsy afa-naneho ny safidiny. Ny ankoatra izay kosa, aoka tsy hiteny na himenomenona satria angamba efa vonona amin’izay hiseho eo. Enga anie ka ny tsara no hiseho, izay tena hahavita no mandresy ka ho menatra eny izy ireny. Raha sanatria ka ny mety no mitranga, efa tompon’andraikitra rahateo ireo kamo nifidy…
Farany, fironan’ny valim-pifidianana aloha no fantatra omaly sy anio. Afaka mandroritra izany arakaraka ny fironany ihany koa ny tsirairay. Na ny valim-pifidianana feno eo aza, tsy mbola ofisialy ka aoka aloha samy hiandry am-pitoniana. Afaka mivonona amin’izay fepetra manara-dalàna tiany horaisina kosa ireo olom-pirenena nifidy, na manaiky na tsia ny vokatra aorian’ny fanambarana ofisialy.